Goobaha Kubadda Cagta ee Noorweed - Codes-ka Online Casino Bonus
Casino Online Xeerarka Bonus > Goobaha Kubadda Cagta ee Norwey
(543 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ...Khamaaristu had iyo jeer kuma riyaaqin ballaaran Norway. 40s iyo 50s, xitaa ciyaaraha fudud ee kubadda ayaa aan ogolaan bulshada. Hadda Norway waxay leedahay laba shirkadood oo dowlad-goboleed, kuwaas oo xaq u leh inay bixiyaan khamaarista noorwiijiga. Norsk Tipping ayaa maamula bakhtiyaanasiibka, ciyaaraha isboortiga iyo ciyaaraha degdegga ah, iyo Norsk Rikstoto ayaa xakameynaya tartanka faraska faraska. Goobaha ayaa aad u caan ah dalka, laakiin waxaa lagu mamnuucay 2007, ka dibna dib loo soo bandhigay qaabab casri ah oo dhexdhexaad ah oo u baahan kaarar gaar ah. Kaararkani waxay ku xiran yihiin xisaabaadka bangiyada ee ciyaartoyda waxayna ku xiran yihiin xaddidaad adag.
Khamaarista online ee Norway
Khamaarista online waa sharci ku ah Norway, laakiin xaaladda halkan waa adag tahay. Norsk Betis, shirkad dawladeed oo maamula bakhtiyaa-nasiibka iyo isboortiska ee Norway, waxay ku baxday online 2002. Waqtigan xaadirka ah waa kan keliya ee websaydhka ah ee ciyaartoyda noorwiijiga ah ay si sharci ah u soo saari karaan ciyaaraha isboortiga, laga bilaabo December 2008 si ay u adeegsadaan adeegyada goobaha ajnabiga ah ee khamaarista ee Norwey waa sharci darro.
Xayiraadda waxaa ka mid ah xayiraad la mid ah sharciyada khamaarka United States - Norges Bank looma oggola inay lacag ka soo qaadato xisaabaadka norwiijiga ilaa xisaabiyeyaasha khamaarka ee khamaarka. Si kastaba ha ahaatee, xukuumaddu waxay qorsheyneysaa in ay dhamaystirto adeeg bixiyayaasha xayiraadda shisheeye aan wali la dhaqan galin, iyo ganacsatada shisheeye ayaa heli kara ciyaartoy maxalli ah.
Liiska Xaafadaha 10 Norwey
Boggaga internetka ee casinos ee aqbala ciyaartoyda ka soo jeeda Norway
Waxaad eegtaa liiska goobaha casino ee aqbalaya ciyaartoyda ka soo jeeda Norway, waxayna bixiyaan cayaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo madadaalo ah oo ka imanaya mashiinnada moobiilka si loo ciyaaro casriyeynta oo ka soo jeeda kuwa sida caanka ah ee caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novolin, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan.
Waxaad sidoo kale akhrin kartaa boggeena internetka ee khadka internetka, si aad u ogaatid kor u qaadida internetka ugu wanaagsan, gunnooyinka iyo fursadaha lacag bixinta ee loo heli karo ciyaartoy ka socda Norway.
Maantana waxaan sii wadeynaa safarkeena wadamada Scandinavia iyo wadankeena waxaa ku yaal waddanka quruxda badan ee fjords, biyaha quruxda badan, barafka iyo barafka duurjoogta - Norway. Dalalkan quruxda badan leh cimilada adagi maaha mid kaaga baxsan. Waxaan ku soconnaa waddooyinka Oslo, sidoo kale waxaan ogaannaa sida waxyaabaha la socdo khamaarka. Maxay yihiin siraha iyo ishortaagga waddankan?
Norway - wax yar oo ku saabsan dalka iyo taariikhda;
Casinos dhulka ku yaalla ee dalka aan hadda la heli karin waana sharci darro;
Labada shirkadood «Norsk Tipping» iyo «Norsk Rikstoto» - ayaa loo oggol yahay inay sameeyaan khamaar;
Lootariyaal la oggolaaday, sharraxaad munaasabadaha cayaaraha, kaararka xoqida, keno, poker tan iyo 2015.
Casinos Online ee dalka:
Dhamaan dadka ajnabiga ah ayaa la mamnuucay tan iyo 2010, qaar badan ayaa sii wadaan inay si sharci daro ah u ciyaaraan, maadaama dhammaan goobaha caalamiga ah la xiro;
norsk-tipping.no/kongkasino - goobta kaliya ee la ansixiyay.
Shan goobood oo ka mid ah caasimadda Norway ee Oslo adreesyada;
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Norwey iyo dadka deggan.
Taariikh kooban oo Norwey ah
Norwey waa Boqortooyada Waqooyiga Yurub, oo ku taal qaybta galbeed ee Jasiiradda Scandinavian. Dalka sidoo kale waxaa ka mid ah hareeraha guud ee jasiiradaha yaryar.
Inta badan, magaca dalka ayaa ka yimid ereyga Old Norse " Norigrvegr ", Taas oo macneheedu yahay" habka woqooyiga. "Oo waa in la xuso, waa jawi aad u baaxad leh oo dalka ka tagay calaamaddiisa taariikhdeeda. Ka dib da'da barafka ee imminka dalka Norway wuxuu ahaa jawi aad u wanaagsan, sidaas darteed waxa ay ahayd dad aad u tiro badan.
Hase yeeshe, kororka cufnaanta ciidda ee dadka ayaa hoos u dhacday, iyo badhkii labka ah ee dadku waxay ku faani jireen magac iyo sumcad. Sidaa darteed, si dhakhso ah xilligii Viking qabatimay, dhulkii uu dakhligiisu yahay ilaa Turkey laftiisa.
Jiilka 18-19 ee Norway wuxuu ku yimaadaa saameynta deriska Denmark iyo Iswidhan iyo ku dhawaad ​​lumiya xaalada gobolka madax banaan. Laakiin 1905 natiijooyinka codbixinta caanka ah ee ururka la midoobey Iswiidhan waa la kala direy, waddankana waxay heshay xoriyad ahaan. Hadda boqortooyada Norway ee xukunka dastuuriga ah, boqorowMagaca waa Harold V.
Aynu sheegno hal mar, khamaarinta wadankan waa mid aad u adag. Marka loo eego dalalka deriska ah ee Swedenand Finland waa sharciyada ugu khatarsan ee khamaarka. Dalka waxaa ku jira shirkado 2 oo keliya («Norsk Tipping» iyo «Norsk Rikstoto»), kuwaas oo loo oggol yahay inay sameeyaan khamaarista. Asal ahaan waa bakhtiyaa-nasiibka, sharraxaadda dhacdooyinka cayaaraha iyo keno. Waxay ku xiran yihiin Wasaaradda Dhaqanka, kaas oo sidoo kale dejiya sharciyadiisa. Kuwaas waxaa ka mid ah xaddiga da'da ee sanadaha 18.
Mashiinnada qalabka ee Norway waxay lahaayeen ubax degdeg ah oo ku jira 2001-2004, laakiin 2007 ayaa dawladdu soo bandhigtay xukun adag oo xajmigeedu le'eg yahay waxayna hoos u dhigtay lambarkooda. Khamaarka online-ka ah ee waddanku nasiib ma laha: tan iyo June 2010, dhammaan goobaha ugu waaweyn ee laga mamnuucay Norway, bangiyadduna waxay xannibayaan dhammaan kaadhadhka iyo kaararka deynta ee casinos adduunka oo dhan.
Dabcan, haddii aad rabto inaad guri kale u sameysatid guriga, ka dibna waxad u noqonaysaa wax. Laakiin haddii ay noqon doonto nidaam ahaan iyo hay'adaha sharci fulinta ee laguu aqoonsaday xaaladdaada ganacsi ee aad u mashquulsan - masuuliyad dambi ah adiga kuma baxsanayso. Sababtoo ah habdhaqan adag oo ku aaddan khamaarka ee wargeysyada ayaa had iyo jeer lagu soo rogaa warbixinno la xiriira weeraro lagu mamnuucay casinos iyo poker clubs, iyo taageerayaasha taageerayaashu waxay u ciyaaraan inay ku ciyaaraan meel ka baxsan dalka.
Matxafka Viking Ship Museum. Cinwaanka: Huk Aveny 35. Tan iyo markii 1931, maraakiibtani waxay rabaan indhaha iyo baaritaannada masistov.Ekspozitsiya waa xajmiga 3, oo lagu dhisay qarnigii XYX, waxana uu ku tiirsan yahay xeebaha ka badan sanadaha 9.
Munch Museum. Cinwaanka: Toyengata, 53. Matxafkani wuxuu soo ururiyey ku saabsan sawirada 28,000, sawirada, sawirada iyo farshaxanada oo la socday nolosha farshaxan weyn. Booqashooyinka 18 oo bilaash ah oo lagu soo galo madxafka. Halkan waxaad ku tuseysaa filim ku saabsan farshaxanka iyo marti gelinta riwaayadaha iyo bandhigyada.
Beerta lagu ciyaaro "Tusenfrid". Cinwaanka: Hoyungsletta, 1407 Sida (qiyaastii 20 km ka soo Oslo). Inta lagu jiro baarkinkani waxa uu ku guuleystay sumcadda xadiiqada xayawaanka ee Scandinavia. Haddii aad dareemeyso qufac, waxaan kugula talinaynaa in aad isku daydo "Speed ​​Monster": baabuur jinsiyad leh awoodda 6,000 ee korontada ayaa kicin doonta xaddiga 90 km / h ee sanadaha 2 oo kaliya iyo xili xaddiyada 7 waxaad ku arki doontaa gobolka ee miisaanka. Waxaa sidoo kale jira xadiiqada biyaha, jimicsiga carruurta iyo makhaayado badan.
Park "Gustav Vigeland." Ciwaanka: Goobta Nobels albaabka 32. Ma waxaad door bidaa inaad tixgeliso naqshadeynta hawada furan? Kadibna waxaad doorbideysaa xulashada. Halkan, ka mid ah dhirta cagaarka ah iyo dhirta qurxoon waxaad ka heli doontaa sawirada 212 ee laga sameeyey granite iyo naxaas.
Dhismaha Magaalada Hall. Cinwaanka: Fridtjof Nansens plass. Dhismaha taariikhiga ah ee ka baxsan dibadda iyo gudaha waa mid aad u xiiso badan. Tan iyo markii 1990 loo bixiyey halkan Nobel Prize. Dhismaha dhismaha waxaad ka heli doontaa quruxda quruxda badan ee qolalka, rinjiyeynta quruxda badan iyo jilicsanaanta frescoes.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Norwey iyo Noorway
Norwey waa dal yar - kaliya oo ku saabsan malaayiin 5 deggan. Qasnadda dabiiciga ah ee ugu weyn ee Norwey - saliida. Waxaa laga helay 1969 oo tan iyo markii loo dhoofiyey Europe;
Paperclip waxay soo bandhigtay oo ku dhalatay Norwegian Johan Valer;
Cimilada Noorweey waxay badasho xawaaraha iftiinka. Xitaa waxaa jira hadal macquul ah: "Ma jecla cimiladeena? Dhibaato, ha sugin daqiiqado 15 ";
«Brunost» - jaleeco ari brown, mid ka mid ah delicacies ugu jecel dalka this;
Tirada carruurta ee qoysku halkan waa calaamad ugu muuqda ee fiicnaanta. Celceliska tirada carruurta ee qoyska - saddex;
Gashiga gacmaha boqorka waxaa lagu akhrin karaa "Dhammaan Norwey";
Mushaaraadka maxaliga ah ee 5 ee 7 kun euro, laakiin canshuurtan dalkan waa mid sare, alaabtuna waa qaali, xitaa adeegyo qaali ah (taksi, dayactir, iwm.);
"Aquavit" - cabitaanka khamriga qaran ee 35 - 50% waxaa lagu baari karaa khamriga, loona adeegsaday dhowr sano oo dhir udgoon (cumin, koronto, fennel, dabiici, qorfe, fennel, St. John's wort). Laakiin kaliya ha iibsan khamriga. Waxaa lagu iibiyaa oo kaliya dukaamada gaarka ah «Vinmonopolet». Alomometetov waa shirkad dawladeed oo kaliya oo shaqeeya maalmaha shaqada.
Norway oo ku taal khariidada Europe
0.1 Khamaarista online ee Norway
0.2 Liiska Xaafadaha 10 Norwey
2.1 Boggaga internetka ee casinos ee aqbala ciyaartoyda ka soo jeeda Norway
3 Khamaarista Norwey
3.0.1 Taariikh kooban oo Norwey ah
3.1 Khamaarista Norwey
3.1.1 Soojiidashada Oslo
3.1.2 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Norwey iyo Noorway
3.1.3 Norway oo ku taal khariidada Europe